International Hospitality Equipment & Supply Sourcing Fair 2022
Made in Asia will be held in Brussels Expo, Brussels, Belgium
A ga-eme ihe ngosi Pizza na Pasta nke Europe na Olympia London, London, UK
A ga-eme mmanụ & nonoil-S&tc na Veronafiere, Verona, Italy
A ga-eme Chem Expo Philippines na World Trade Center Metro Manila, Pasay, Philippines
METAV mere atụmatụ na Messe Dusseldorf, Düsseldorf, Germany
Akụrụngwa ọbịa nke mba ofesi & Ngosipụta ihe na-eweta 2022
Categories: Ile ọbịa
The China (Shanghai) mba hotel akụrụngwa na-enye mma ngosi Shanghai China (Shanghai) mba hotel ngwá na-enye mma ngosi Shanghai, kwadoro site Shanghai Jinjiang mba ngosi ngosi co., LTD, ga-enwe na mba mgbakọ na ngosi center (Shanghai).
N'ịchịkọta ahụmịhe na-aga nke ọma nke nnọkọ niile gara aga, ogbako ahụ ga-anwa ike ya kachasị mma iji wuo akụrụngwa nkwari akụ na ihe oriri na ịzụ ahịa na ịzụ ahịa ahịa. Ihe ngosi ahụ na-ekpuchi ụlọ nkwari akụ electromechanical, arịa ụlọ nkwari akụ, ime ụlọ ịwụ, akwa, linen, kichin, iko seramiiki, nri na mpaghara ndị ọzọ, dabere na Shanghai, ụlọ ahịa na-eweta ahịa na mba, yana ọkachamara ya, na-atụ anya, ịdị mma dị elu iji dọta ndị na-azụ ahịa si gburugburu. ụwa, ndị nwe ụlọ nkwari akụ na ndị mmepe na ndị ọzọ na-azụ ahịa ọkachamara na saịtị.
China (Shanghai) International Hospitality Equipment & Supply Sourcing Fair ga-egosiputa ahụmịhe na-aga nke ọma ma wulite akụrụngwa ụlọ nkwari akụ ma nyekwa ahịa ahịa na ike niile. Ọ na-enye usoro ikpo okwu kachasị mma maka ndị na-achọ inweta nghọta banyere ile ọbịa dị ka ụlọ nkwari akụ nkwalite na nnweta aghọwo okwu ọkụ na ụlọ ọrụ ahụ, n'otu oge ahụ, ụlọ ọrụ na-apụta dịka ụlọ nkwari akụ, ụlọ ndị a na-arụ ọrụ, na akwa na nri ụtụtụ na-adịkarị iche ma ahaziri nke ọma echiche nke ndị na-azụ ahịa.
Ezigbo ụlọ ezumike
Uniformlọ oriri na ọ Hotelụ uniformụ, akwa akwa ụlọ oriri na ọ towụ ,ụ, akwa nhicha ahụ, akwa nhicha ahụ, akwa ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, akwa mkpuchi akwa, akwa eji achọ mma, usoro ịsa ahụ;
Insurance mkpuchi na mberede
Ọrụ nchedo onunu, akụrụngwa nche, ihe ịrịba ama ntuziaka, akụrụngwa mberede, ngwa mgbochi nje, ụzọ mgbapụ;
Ngwa ndị ọbịa
Lọ oriri na ọ electricalụ electricalụ ndị ọbịa, ebe a na-anabata ndị ọbịa, ebe a na-ewepu ngwa ngwa;
Ime ụlọ n'ọnụ ụlọ na-eweta
Akara, ụgbọ ala ọrụ, nche anwụ, bọket ash, ihe mkpofu ahịhịa, oche akwa, akpa akwa, akụrụngwa ozi, igwe na-enwu akpụkpọ ụkwụ, igbe ọkụ ala, akpa akwa, igwe mgbochi igwe mgbochi mmiri, oge ụwa, elekere ụwa, trolley, ọnụahịa elektrọnik;
Furniturelọ nkwari akụ
Ime ụlọ ime ụlọ, oche ụlọ ndị ọbịa, arịa ọfịs, arịa ụlọ ihi ụra, arịa ụlọ ọgbara ọhụrụ, tebụl iri nri na oche, oche dị n’èzí, oche dị nro, arịa ụlọ gboo;
Bathroomlọ ịsa ahụ nkwari akụ na ihe nhicha
Ndi na asa-akwa, ngwa ngwa, ngwa ngwa, ngwa ngwa
Ceramics na ngwaahịa iko
Tags: Ngwa akụrụngwa na nkwari akụ, Cleanlọ oriri na nkwari akụ dị ọcha, Nkwari akụ, Nkwari akụ nkwari akụ, Linlọ nkwari akụ, Ngwa ndị ọbịa, Lọ Nnabata bbylọ Ọrụ
Stella Ọnwa 8 ọnwa iri na otu
Nwere mmasị na ngwaahịa na-atọ ụtọ
Abbas Mangarathodi 2 afọ
Ngwa eji esi nri Hotellọ oriri na ọ kitchenụ Hotelụ eji esi nri
Guangzhou Hotel Equipment na ọkọnọ Ngosi (GHESE)
Hailọ Ọrụ Nle ọbịa na Shanghai na Expo - HDE
Expo nkwekọrịta ụlọ na Deco maka Ngwongwo Azụmaahịa na Hotels